SIDEE LOOGA TAKHALUSI KARAA MASASKA XAGAAGA XAGAAGA: TALOOYINKA UGU FIICAN - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Sida loo helo mas ka soo dacha
Awoodda masaska ee xagaaga xagaaga - ma aha dhibaatada ugu caansan, laakiin haddii ay kacdo, xayawaankani waxay noqon karaan masiibo dhab ah. Ka dib oo dhan, ciriiriga cawska, isagoo og in meelaha ku dhow xamaarad iyo qatarta khatarta ah ay u jajabin karaan - waa raaxo, aynu wajahno, sidaas-sidaas! Sidee iyo caawimaadda macneheedu waxa ay macnaheedu noqon kartaa abeesooyin ka takhalusi kara iyo waxa la samaynayo si aan u dhibin qaniinkooda?
Halkee yaa abeesadu ka yimaadaan sirqoollada beerta
Dhibaatada ugu weyn ee muuqaalka xayawaanka ee dadka ku nool - dadka naftooda. Meeleynta dhulalka cusub, dhisaan aagaga duurjoogta ah ee dabiiciga ah, waxaanay u jaraan kaymaha ujeedooyinkan, waxaanu tallaabo ka qaadnaa dabiiciga dabiiciga ah ee xayawaanka, oo ay ku jiraan masaska, oo ka tagaan iyaga oo aan lahayn doorasho laakiin si ay u helaan meel cusub. Inta badan waxay ka helayaan cawska hoos yimaada geedaha beerta.
Waxaad faa'iido u lahaan doontaa inaad baratid sida loola dhaqmo jiirka oo ka degay goobtaada.
Mararka qaar, si qarsoodi ah, waxaan si shakhsi ahaan ah u soo dhoofi karnaa si aan u gaarno dhismaha iyo dhismaha walxaha.
Fursad sidan oo kale ah waa mid qalaad, laakiin ma aha in la dhimi lahaa, gaar ahaan tan, markii lagu qasbay in lagu soo galo shuruudo cusub, abeesadu si gaar ah ayey u dhaqmi karaan.
Waa muhiim! Goobta ugu caansan ee raaxada guryaha gurigeena waxaa laga yaabaa in ay qashin ama qashin compost ah, sababtoo ah kala burburinta maaddada jidhka sii daaya kulaylka iyo qoyaanka. Intaa waxaa dheer, gudaha tuulooyinka sida aadka u dagan oo deggan, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah duugista inta lagu jiro qodista ukunta iyo taranta taranka. Laakiin sidoo kale ka taxadar waa lagama maarmaan in ay ku jirto mugdi madow iyo qabow, halkaas oo abeesadu u diyaari karaan buulkeedii oo raaxo leh.
Xididdada geed geedka ama dadka qaangaarka ah ee ku filan, dabacsan oo xajin leh ayaa sidoo kale degi kara. Waa in aan qiranno in nooca xayawaanka ee ku yaala dhulkiisa uu sababi karo cabsi badan inta badan milkiilayaasha iyo gaar ahaan kuwa guriga, laakiin xaqiiqda ah, ma ahan oo dhan lagama maarmaanka u ah inay ka baqdaan caafimaadkooda.
Inta ugu badan ee ciriiriyadayada ah waa abeesooyin, abeesooyin, coppers, ma aha sumeyn dhammaan.
Laakiin waxaa jira wax ka reeban: masawir. Qaniinyada nabarradani dhab ahaantii waxay noqon kartaa mid dhimasho ah, inkasta oo la rumaysan yahay in maskaxda lafteedu aysan weerarin qof si aan khatarta u galin, deriskaas oo kale ayaa xaqiiqo ah in ay si daacadnimo ah oo kali ah u tuuraan.
Sida loo xoqdo abeesada dacha
Si aad u fahamto sida loo jajabiyo masaska goobta, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa abaarta aan jeclayn ama ka cabsaneynin si ay u abuuraan xaaladaha ugu dhib badan iyaga. Dilida nabarrada ma aha habka ugu wanaagsan ee lagula dagaallami karo Iyaga oo leh, waa wax aad u fiican in laga caawiyo xayawaanku inay go'aan gaar ah ka qaataan inay kaa tagaan weligaa.
Nadiifinta joogtada ah
Haddii nabigu si ula kac ah u gurguurto goobtaada, waxay u badan tahay, inuusan halkan ku soconayn muddo dheer, haddii aysan meel ka helin habka loo sameeyo buulka.
Maxay yihiin meelaha, horay loola soo xushay, laakiin haddii aad baabi'iso daloolka compost - waa adag tahay sida guul u ah beeralayda si looga takhaluso xamaamka, ka dibna waxaa lagugula talinayaa in laga takhaluso kaydka qalabka dhismaha (gaar ahaan qoryaha) wakhtiga. Dabcan, wax waliba waxay faa'iido u yeelan karaan beerta dacha, laakiin haddii dhibaatada maskaxdu kacdo - dhamaan qashinka!
Sida qashinka compost, ugu yaraan waa wax macquul ah in la dhigo meel aad adiga iyo carruurtaada ugu socdaan ugu yaraan, iyo sidoo kale hubso inaysan jirin dhir aad u sarreeya oo ku wareegsan ceelkaas oo aanad ku ogaan karin viper qarsoon.
Si taxaddar leh u fiiri xididdada geedaha gaboobaha ah iyo xoortay geedihii hore ee suurtogalka ah ee laga yaabo in xayawaanku ka dhigi karan bakhti.
Geedaha waayeelka leh xididdada qaawan iyo qoyaanku waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo waqtigooda. - Waxay kaa badbaadinaysaa oo kaliya abeesooyinka, laakiin sidoo kale ka soo cayayaanka kala duwan ee cayayaanka.
Waa muhiim! Habka ugu horeeya ee looga takhalusi karo masaska ka soo jeeda waa inuu ka gooyo hoyga, tan labaadna waa in laga reebo cuntooyinka (abeesada quudinta on toads iyo jiirka yar).
Ka dib markaad qaadatid qashinka, ha ilaawin inaad si taxadar leh u cabbirto meesha uu ku yaal. Haddii aad ku qalabaysay cawska cagaaran goobta - ha ilaawin inaad si joogto ah u cawska qorto. Nudaha xamaashka ah ee ku yaala waa mid ku haboon, laakiin si sahlan ayuu uga baxaa qorraxda. Waxay ku jirtaa caws dheer oo leh masalan ugu sareysa ee aanad ku ogaan karin martidaas oo aad qaniinto qaniinyo.
Dhawaaqa qulqulista cawska ayaa ah kan ugu fiican ee maskaxaha.Xamaasadaani waxay neceb yihiin dhawaaqa waxaanay isku dayi doonaan in ay ka fogaadaan asalka sida ugu dhakhsaha badan.
Waa macquul in la waydiiyo cidda kale, marka laga reebo mongooses Rudyard Kipling's 'Rikki-Tikki-Tavi', cuno cuno iyo, sida, xayawaanka ayaa soo jiidan kara dhinacooda dagaalka ka dhanka ah dariskaas aan loo baahnayn. Marka hore, waa inaad ka fekertaa qashinka caadiga ah. Ducada "shimbiraha ka soo horjeeda maskaxda" waxaad si ammaan ah ugu qaylin kartaa xayawaanka cayayaanka ah. Buufiyadu waxay ku guulaysanaysaa xayawaannada kale ee yaryar, oo aan loo baahnayn aagga - jiirka, jiirka, jiirarka, jiirka, baradhada, qorraxda, iwm.
Ma taqaanaa? Dhakhaatiirta Witty waxay la yimaadeen habka asalka ah ee lagu kiciyo duufaanka si ay ula dagaallamaan kuwa ka soo horjeeda kuwaas oo aan ka awood badneyn awoodda: ku shub khamriga aan khamriga lahayn ee khamriga yar (khamriga ama biirka) meeraha yaryar oo ku rid jidka yar yari. Waxaa la aaminsan yahay in sariirta sakhradda - hub khatar ah.
Si aad ah u hadal, cabitaanka qamriga ee khamrigu waa bini'aadamnimo, sababtoo ah sida kiciyaashu waa wax aad u dhib badan jidhkooda. In badan oo ka sii fiican ayaa soo jiidan karta qashinka caanaha ama hilibka.
Xayawaankani waxay jecel yihiin jansi, laakiin badeecadan dufan ayaa waxyeello u geysanaysa jir yar. Martida martida ah waxay sidoo kale ku raaxeysan karaan qaar ka mid ah berry ka soo beertaada.
Marka laga soo tago qoyaanka, bisadaha iyo eeyaha waxay iska caabin karaan riwaayadaha, laakiin waxay ka duwan yihiin kuwa geela beereedka ah ee dila xayawaanka cuntadooda, waxay ku xiran tahay rabitaanka xayawaankaaga iyo niyadda. Waxaa jira noocyo gaar ah oo loo yaqaan eeyaha (tusaale, Australian Terrier) oo si xirfad leh uga faa'iideysan kara xayawaanka.
Xayawaanku waxay kuu qaban karaan adeeg wanaagsan sida dabiiciyaasha dabiiciga ah: dareemida urta dhogorta, abeesada cabsida leh ayaa si iskaa ah uga fogaan karta khatarta iman karta.
Si aad uga caawiso inay sameeyaan go'aanka saxda ah, waxaad dhigi kartaa waxyaabo ay ka mid yihiin dhogorta ama dhogorta eyda soo ururisay, taas oo khatar ka iman karta aragtida buulkisa suurtogalka ah.
Waa muhiim! Sida caadiga ah, abeesadu ma u dhaqmaan si taxadar leh, laakiin waxaa jira wax ka reeban: Ilaalinta ilamaha. Sidaa darteed, guga iyo ka dib dhamaadka xagaaga, marka abeesooyinka gumeysiga iyo ukunta, haynta daryeelka gaarka ah waa in la qaato.
Boogaha, sida jiirarka, ha u dulqaadin buuqa iyo qalalaasaha. Iyada oo ku saleysan hantidaas, saynisyahannada ayaa abuuray qalab gaar ah. Dhowr jeer oo daqiiqad ah, waxay soo saaraan wareegyo dhawaaqa ah oo ay abeesadu u dhaqmaan oo ay ku qasbaan inay raadsadaan nabadgelyo dheeraad ah.
Baro sida loola macaamilo jiirarka aaggaaga.
Helitaanka qalabka noocan oo kale ah waa hab fiican oo lagu xalliyo dhibaatada, sababtoo ah waxay u badantahay bani-aadamka iyo xayawaanka guryaha, iyo, sidoo kale, waxyeello uguma keenin ciidda.
Qalabka casriga ah waxaa ka mid ah isticmaalka tamarta qorraxda ee dib u cusbooneysiinta, sidaa darteed, si guul leh u rakibida qalabka mar, waxaad illoobi kartaa dhibaatada. Waa lagama maarmaan in la helo goobta saxda ah ee lagu rakibo jilibka: waa inay ahaataa mid ugu dhow meelaha ugu khatarta badan (tusaale ahaan, godka compost) oo aan ku jirin wax isku dhafan oo dhexdhexaad ah oo ka tarjumaya ama soo jiidaya mowjadaha dhawaaqa.
Waa muhiim! Dhamaan maskaxdu waxay u adkaysataa dareemaha ultrasonic iyo dhawaaqa, laakiin waxay dareemeysaa qalqal aad u liidata. Sidaa daraadeed, marka la eego dalalkeena, doorbididda waa in la siiyaa qalqal galinta, halkii ay ka maqnayd cabsida ultrasonic.
Badeecadayaashu waxay noqon karaan ultrasonic, qalalaaso ama cod. Dhamaadka dambe waa mid la doorbidaa, maadaama ay ka xanaajinayaan maaha oo kaliya abeesooyinka, laakiin sidoo kale bipedal booqdayaasha goobta.
Dhinaca kale, caqabadda dabiiciga ah ee buulka dabiiciga ah waa shaqo adag oo laga fuliyay dalka. Marka laga soo tago cawska cawska ah ee kor ku xusan, tani waxay noqon kartaa shaqeynta sawir wareeg ah, qalabyo kale ama kaliya shirkad saaxiibtinimo leh. Waxaad abuuri kartaa buuq iyo shakhsi ahaan diyaar u ah, diyaar garow iyo qalabyo kale, si kastaba ha ahaatee, sida lagu sheegay, tirtireyaasha ayaa si fudud u dulqaadan kara dareenkaas.
Mararka qaarkood waxay bixiyaan si ay u soo saaraan aagga oo la googooyo maro qoyan oo shidaalka naaftada ah. Waxay noqon kartaa in xayawaanka aan jeclaan laheyn qashinka dalka, laakiin haddii aad rabto in aad neefsato naftaada waa su'aal weyn.
Sunta iyo kiimikooyinka
Waxaa jira jawaabo dhowr ah su'aasha sababta ha ku dhicin masaska. Habkani waa wax aan fiicneyn: haddii xayawaanka ay soo jiidato wax ka mid ah gurigaaga hooyo (tusaale ahaan, waxaa jira meel wanaagsan oo buulkeedii), macnaheedu waa inay mar kale iman doonaan. Intaa waxaa dheer, in la burburiyo xayawaanka in, ka duwan cayayaanka cayayaanka, ha u keenin waxyeello waxyeello ah, iyo weerarka kaliya ee difaaca - bini'aadanimada. Hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay, marka dhimanaysa, abeesadu waxay u bixisaa urin gaar ah, taas oo ay qaraabadoodu xajistaan.
Ma taqaanaa? Waayo, quruumo badan oo dunida ah, oo abeeso weligeed ah waa la mamnuucay. Xayawaankan waxaa loo tixgeliyaa calaamad wanaag ah iyo farxad guriga, xitaa nooc ka mid ah "ilaaliyaha", dilkaas, waxaad dishaa oo ilaalisaa; aaminsan yihiin in nafta awoowayaashii dhintay ay u guuraan iyaga.
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad isticmaasho sunta. Laakiin u diyaargarow habka yar ee habkan: masaska waa wayaanaal, ma cunaan cunnooyin sumaysan, oo haddii xayawaanku ku foorarsado jawiga, waxay u egtahay in geedka qunyar socodka ah, ay khatar u tahay adiga, caruurtaada iyo xayawaanka rabaayada ah. Sidii hore loo soo sheegay, naaftada waxaa loo isticmaalaa sida sunta jilicsan. Waxa kale oo lagu dabaqay herbicides, nitrate, naphthalene, ammofoska. Sunta ayaa ka soo horjeeda xayawaanka qabow-dhiigga leh sidoo kale waa la heli karaa waxaana loo isticmaali karaa.
Aad ayay u bini'aadinaysaa in la isticmaalo hababka dadweynaha ee ka soo horjeeda masaska. Waxaa la rumeysan yahay in xayawaankani aysan u dulqaadan karin urta adag, oo ay ka mid yihiin dabiiciga iyo gebi ahaanba halis u ah bani-aadamka.
Waxaad dhigi kartaa toonta wareega goobaha ama garoobo qalalan qallalan (tani waxay kaa badbaadin kartaa booqasho xamaasad ah, laakiin lagama yaabo inaad ka fogaato goobaha ka dib marka ay degto). Baabuurtu waxay sidoo kale si xun u falceliyaan dabka iyo urta gubashada. Beerta qaarkeed waxay ku talineysaa in dabka la dhigo meel dusha laga saaro, laakiin habkani wuxuu ku kala bixin karaa maaha oo kaliya abeesooyinka, laakiin sidoo kale deriska oo dhan, sidaas darteed waxaa fiican in si fudud loo sameeyo dabka cawska iyo caleemaha qalajinta, ilaalinta dhammaan talaabooyinka badbaadada dabka.
Sidii hore loo soo sheegey, jilayaasha ma jecla urta daboolka dabiiciga ah. Haddii aadan haysan bisadaha ama eeyda, waxaad ku faafi kartaa hareeraha wareegga muraayadaha yar yar, adigoo isticmaalaya suuf ama waxyaabo duug ah.
Ma taqaanaa? Si loo weeraro, masaasaddu waxay u baahan tahay kaliya 0.7 ilbiriqsi: inta lagu jiro waqtigan nabarka gabbaadka, qaniinyo iyo ku noqoshada booskiisa asalka ah. Hase yeeshee, si guul ah u tuurista, xayawaanku wuxuu u baahan yahay in la taageero, sidaa daraadeed, bayaanka, in biyaha, ee aanad khatar galin, waa mid aan sal lahayn.
Iyo laba talooyin oo dheeraad ah ee ugu dambeyntii. Abaalmarinta ayaa aad u soo jiitay meelaha ku yaal dooxada. Sidaa darteed, haddii aad nasiib ku filan tahay inaad ku hayso aqri ku taal xeebta aadka u dhow - si gaar ah u taxaddar. Oo markuu soo helo mid dhulka ka soo baxa, kolkiiba waxaad u qaadataa sida wax lagu tumo, maxaa yeelay, waxay ka cabsadaa dheriga duurka, oo waxay u madax adkaadeen dadka dhexdiisa. Intaa waxaa dheer, qaar ayaa ku doodaya in abeesadu si ula kac ah u jajabisay maqaarkeeda meel ay jecel yihiin, taas oo dhab ahaantii qorsheyneysa inay ku noqoto.
Markaad ka heshid xayawaan dhulkiina, ha isku dayin inaad cadeeysid. Inkastoo xaqiiqda ah in tobankii tobnaad ee adduunka ee adduunka ah uu sumeynayo sida tirakoobka, khaladku wuxuu noqon karaa mid qaali ah. Xitaa ka dib markaad disho masar, ha ku taaban gacmahaaga, sidaa darteed, adigoo nuugaya urka xayawaanka, uma baahnid inaad u noqotid cunnooyin nololeed "qaraabo".
Isla sidaas ayaa lagu daboolayaa maqaarka laga helay - u qaad gacmo gashi oo ku rid bac aan kudheer lahayn ka hor intaadan qaadin.
Eeg sidoo kale: hababka iyo hababka wax looga qabanayo saxaaxa dillaac.
Ilaa ay abeesadu ka tagaan goobtaada, ku sii soco kabaha sare (doorbidayaa kabaha caagagga) oo si taxadar leh u eeg cagahaaga. Suurtagalnimada in maskaxdu ku weerari doonto waa ku dhowaad eber.
Waa arrin ka duwan haddii aad dhibtooto buulkeedii, ama ugu yaraan soo wajahday xilligii "khatarta ah", ama ka soo baxday xayawaankii oo si qarsoon u dabbaalanayey qorraxda.
Waa muhiim! Yaraalladu si fiican uma arkaan, laakiin waxay si fiican u maqlaan oo ay dareemaan dhaqdhaqaaq dhaqso ah. Sidaa daraadeed, ogeysii dhirta adigoo isla markiiba ah, qaboojiyaha oo ilaali. Haddii xajiistu kugu aragto oo aanad gurguurin, aad u taxadar leh, si tartiib tartiib ah iyo si aamusnaan ah intii suurtagal ah, iskuday inaad u dhaqaaqdo masaafo badbaado leh. Taas macquul maaha in lagaa socdo.
Helitaanka xamaarad goobta, ha ku dhajin ul, laakiin isticmaal saamiga codka. Haddii ayan jirin meel buul ku dhow, abeesadu si dhakhso ah ayuu u cararayaa, haddii ay jirto - ulku wuxuu kicin karaa oo kaliya inuu weeraro.
Gargaarka Koowaad ee Qaniinyada Qaniinka
Qaniinyada xayawaanku waa halis u ah bini-aadanka, iyo halista ah ee sumoobidda iyo suurogalnimada dhimashada waxay ku xiran tahay tallaabooyinka la qaadayo daqiiqadaha ugu horeeya ka dib marka sunta ay galaan jirka.
Ma taqaanaa? Afka dabiiciga ah ayaa ah mid aad u yar, laakiin marka weerarrada maskaxdu ay si fudud u furi karaan afka, si ay uhesho ceelasha sare iyo kuwa hoose ee xiriirka ka dhexeeya midba mid toos ah.
Sidaa darteed, markaad qaniinto abeeso:
Ka saar khatarta khatarta: kaxee maskaxdaada ama iska baxso (haddii aad sawir ka qaadan kartid, samee muhiimadda - waxay u fududaan doontaa dhakhtarka inuu ku siiyo caawimaad sax ah).
Si fudud u qaado (ama isku day inaad dejiso qaniinyada).
Xakee gacanta ama lugta qaniinyada. oo ha u dhaqaaqin (waxaa muhiim ah in meeshii qaniinay laga jaray wadnaha).
Ku riix geesaha boogaha leh farahaaga iyo nuugi sumowga iyada oo ay weheliso dhiig, marka ugu horeysa ee biyaha la geliyo afka si loo yareeyo diirada sunta ee afkeeda (hargabka maskaxdu ma aha khatar haddii la liqo, laakiin waxaa laga yaabaa inuu waxyeelo ku yeesho haddii uu jirro ku jiro afka). Ha ilaawin inaad tufidid! Ku celi nidaamka ugu yaraan rubuc saacad ah: waxaa la aaminsan yahay in habkani uu kuu ogolaanayo inaad soo saaro illaa 50% suntan boogta iyadoon haysan dhiig kale.
Waa muhiim! Adigu ma jiidi kartid nabarka kor ku xusan qaniinyada! Sida ugu fiican ee looga hortago sunta ka faafitaanka ma aha in la dhaqaajiyo dheecaanka garabka.
Si dhakhso ah u nadiifi nabarka (oo aan la qaadan khamriga), ku xir dharka nadiifka ah - iyo isla markiiba isbitaalka! Waa suurad wacan in bukaanka ee kiiskan wuxuu ku jiray meel bannaan, madaxa iyo meeshii qaniinay - ka hooseysa taalladda.
Haddii wadadu muddo dheer socoto, ama waa suurtogal in la arko dhakhtar dhan, cab cabitaan badan intii suurtagal ah, sidaa darteed sunta haray sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka jirka ah ee dabiiciga ah. Khamriga, khamriga iyo cabitaanka kale ee wax lagu karsado ayaa ka hortagaya.
Marka miyir la'aanta ama xirashada wadnaha, nacfiga macmalka ah iyo maskax wadnaha aan tooska ahayn ayaa loo isticmaalaa.
Sidoo kale habka dhakhtarka ayaa faa'iido leh qaado antihistamiin - Tusaale ahaan, suprastin, diphenhydramine, ama ceegil si loo yareeyo fal-celinta xasaasiyadda suurtagalka ah ee qaniinyada. Isla markiiba siiso laba kiniin, xitaa haddii dhibbanuhu yahay ilmo. Haddii ay lagama maarmaan tahay, waxaad sidoo kale siin kartaa febrifuge.
Dhibaato ha ahaato khatarta sunta maskaxda, waa inaadan argagaxin, sababtoo ah daawada casriga ahi waxay leedahay antidote wax ku ool ah oo gabi ahaanba ka takhalusi kara waxyeellada waxyeelada leh ee jirka.
Taasi waa sababta kiisaska oo dhan Hawsha ugu muhiimsan - sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah in aad ku jirtid xarun caafimaad.
Haddii aadan imaan karin isbitaalka saacadaha soo socda ka dib qaniinyada, waa inaadan quusto - raac talooyinka kor ku xusan oo dhan, si tartiib ah uga waraabi, cabitaan badan, iyo kiiskan, jirka adag ayaa si guul leh ugu guuleysta sunta aan lahayn serum. Qaniinyada viper waa qatar, laakiin ma ahan kuwo halis ah, haddaad si sax ah u dhaqantid. Haddii laguu qaniiniyo maskax aan qarxin, weli waxaad u baahan tahay inaad fayadhowrto boogta, oo maadaama aad adagtahay in aad hubiso in aad ka soo gaartay weerarka maskaxda waxyeello lahayn, gargaarka degdegga ah ee kor ku xusan ee kor ku xusan waa in la siiyaa kuwa dhaawacmay.
Baro wax walba oo ku saabsan wax ka qabashada shidaalka.
Abaalku maaha deriska ugu wanaagsan ee dadka, laakiin marka loo eego hannaanka dabiiciga ah ee xayawaanku waxay ciyaaraan door muhiim ah oo lagama maarmaan ah. Sidaa darteed, haddii martida noocan ah ay soo booqdaan goobtaada, isku day in aad ka takhalusi bini-aadmiga, abuurista shuruudaha ugu yaraan soo jiidasho leh hareeraha hareeraha. Ka tirtirid waa wax aan fiicneyn oo khalad ah!